Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana · Marsa, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana · Marsa, 2012
Tantara mikasika ny Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana tamin'ny Marsa, 2012
Bahrain: Mibitsika Manohitra Ny Formula 1
Bahrain 31 Marsa 2012
Raha efa mivonombnona ery i Bahrain hampiantrano ny Grand Prix, manomboka ny 20 hatramin'ny 22 Aprily, ireo mpiondana aterineto kosa dia mifamory mba hanafoanana ilay fifaninanana fiarakodia amin'ny filazana fa mbolamitohy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona atao amin'ireo mpanao hetsi-panoherana mikatsaka zo demaokratika msimisy kokoa ao amin'ity firenena Arabo ity. Mona Kareem dia mitondra fanazavana amin'ny fanentanana iray ao amin'ny Tewitter mba hisarihana ny saina hibanjina azy ity.
Amerika Avaratra 31 Marsa 2012
Syria: Taona Iray aty Aoriana, Am-pitiavana Be Avy Ao Beirut
Libanona 27 Marsa 2012
Ny 15 Martsa dia nahatratra ny taona voalohany nisiany ny Revolisiona Siriana, voamariky ny fahavononana toy ny tany amboalohany . Hetsi-panoherana tany amin'ny tanàna samihafa nanerana izao tontolo izao no naneho ny fanohanan-dry zareo ilay revolisiona raha nanana ny fombany manokana ho entina maneho ny firaisankinany kosa i Beirut. Ity lahatsoratra ity no manazava ny fomba nanehoan'ireo mafàna fo ny fitiavan-dry zareo ny revolisiona Siriana teny amin'ny rindrin'i Beirut.
Koety: Tenifototra Iray Ve Dia Mampigadra Mpisera Twitter?
Koety 27 Marsa 2012
Satria moa fahita any amin'ny firenen-drehetra ny mpisera Twitter mampiasa tenifototra, dia misy ny tenifototra miforona isan'andro, isan'ora, eny fa na dia isa-minitra aza indraindray. Tany Koety, namorona ny tenifototra #بطارية (bateria na mpiteraka angovon'aratra amin'ny teny Arabo) ary dia vaky ny vavahadin'ny helo. Manazava ny antony amintsika ny mpamaham-bolongana Koesiana Abdullatif AlOmar.
Tonizia: Bilaogera Manampy Amin'ny Fandrafetana Ny Lalam-panorenana
Tonizia 27 Marsa 2012
Ny 23 Oktobra 2011, nifidy ny antenimiera handrafitra ny lalam-panorenany vaovao ry zareo Toniziana, taorian'ny nanonganana ny fitondran'i Ben Ali. Amin'izao fotoana, dimy volana aty aoriana, vao ny fandinihana ireo drafitra natolotra no natomboky ny antenimiera. Kanefa, ny tsy fitovian-kevitra manodidina ny artikla voalohany dia mampihisatra ny asan'ny antenimiera ary tafiditra eo afovoan'ny dinika ny momba ny Islam sy ny fizakana ny maha-olom-pirenena Arabo. Nijabahan'ireo mpiondana aterineto ilay izy mba hanampiany amin'ny fanotorana ny hantsana.
Ejipta 27 Marsa 2012
Palestina 26 Marsa 2012
Tontolo Arabo: Mitodika Any Amin'ny Twitter Mitaraina Noho Ny Vovoka
Arabia Saodita 22 Marsa 2012
Namely ny faritry ny Helodrano ny tadiom-pasika, ka nanelingelina ny fifamoivoizana an'habakabaka tany Yemen, sy nampikatona ny sekoly tany Arabia Saodita. Nitodika tany amin'ny Twitter ny mpiserasera avy any Yemen, Arabia Saodita, Emirà Arabo Mitambatra ary Katàra raha nitaraina.
Ejipta 21 Marsa 2012